Uyicheba njani ikati - Ikati Care
Uyicheba njani ikati
Ukwazi indlela yokucheba ikati yakho ekhaya kunokukunceda ugcine kwimirhumo yabantu abacocayo, ususe iimethi ezingaphenduliyo kubaphuli bemethi, okanye ulungiselele isilwanyana sakho ngaphambi kwenkqubo kwiofisi yezilwanyana. Isitshixo sokucheba ngokukhuselekileyo kukufumana ikiti yakho ikhululeke ngesixhobo osisebenzisayo.
Izixhobo zokuTsheva iKati yakho
Ekuphela kwento oyifunayo ngokwenene kukucheba iikatiizibini ezimiselweyo. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kubushushu bekati yakho kunye nendlela ekufaneleke ngayo ukuba achetywe, unokufumana ezinye izinto ezimbalwa ziluncedo ngokunjalo.
Imisebenzi yomzimba opheleleyo enjengokusikwa kwengonyama: Inani leeklipa ezili-10
Ukunciphisa ikati yakho: Inani lamaqhosha angama-40
Ithawula lokucoca ngokulula ukuba awunawo umgangatho onokutshayelwa ngokulula
Iiglavu zinokunceda ukugcina izandla zakho zingakhuhle, nangona zinokuzikhethela
Zeziphi iintlobo zekati ezaziwa kakhulu?
Amanqaku 8 Okonwabisa ngeekati
Ungayithatha ikati yakho uyiyise kumkhwenyana ukuze ayichebe, kodwa ukuba ufuna ukuyenza ngokwakho, khumbula ukuba yonke ikati yahlukile, kwaye abanye bayakuxhathisa ukucheba ngaphezulu kunabanye. Sebenzisa ezi ngcebiso kunye neenkqubo ukuqinisekisa ukuba ikati yakho ifumana ukucheba okukhuselekileyo kunye nokukhululekileyo.
1. Nciphisa iinzipho zakhe kuqala
Iikati ezininzi ziya kuzama ukuzikhusela xa zichetyiwe. Yidlale ngokukhuselekileyo, kwayekliphu iinzipho zakhengaphambi kokuba uchebe.
2. Vavanya isandi
Vavanya isandi seziqhotsi kufutshane nekati yakho. Ukuba ikati yakho iyoyika ngesandi kuphela, unokufuna ukuqaphelausebenzisa ihasheokanye uthintele isixhobo, okanye ubuze ugqirha wezilwanyana ukuba akuthomalalise ngaphambi kokuba uqale.
3. Bamba ulusu Taut
Amakati anolusu oluguquguqukayo noluthambileyo oluhamba ngokulula. Oku kuthetha ukuba inokuthi ibambe ngokulula phantsi kwesiqwengana, ngokunokwenzeka simnike ipiniki okanye usike. Bamba ulusu ngokuqinileyo, ulitsale njengoko ulicheba ukunqanda ukusikwa.
4. Qalisa phezulu
Qala phezulu kumzimba wekati, kwaye usebenze indlela yakho eya kwisiseko somsila-kodwa musa ukucheba umsila uqobo.
5. Bamba ikati yakho
Bamba ikati yakho ngobunono, kodwa ngokuqinileyo kwaye usebenze ujikeleze umzimba wakhe, uhlala uqala ngasemva kwentamo kwaye usebenza indlela yakho ebheke emsileni.
Iingcebiso ngokucheba okungcono
Zama eziiingcebiso kunye namacebongamava angcono kuwe nakwikati yakho.
Uyicheba njani ikati eneMats
Bamba uboya obudityanisiweyo ngesiphelo sayo, kwaye ubushukumise ngobunono usiya kwelinye icala xa uchebile macala onke nangaphantsi kwawo. Kuxhomekeke ekubeni ikukufuphi kangakanani imethi kulusu, unokukwazi ukufikelela kuyo ngcono kwi-engile enye, okanye kwii-engile ezininzi. Qhubeka uyihambisa ngobunono kwaye uyisike kancinci de ibe ifumaneka simahla. Ukuba kunokwenzeka, yiba nomncedi otsale ulusu olujikeleze iflethi ukuthintela ukuba ingangeni emethini kwaye isikwe.
Wulumkele umsila nanini na kunokwenzeka
Izinwele ezisemsileni wekati yakho zithatha ixesha elide ukukhula kwakhona. Ngaphandle kokuba kudityaniswe kakhulu okanye kufuneka kuchetyiwe ngenkqubo, cinga ukushiya iinwele ixesha elide ukunqanda ukuzicheba. Ukuba ufuna ukuyicheba, zama ukuyinqanda kancinci kangangoko; iikati zinokuphazamiseka kakhulu ukuba azikwazi ukuhambisa imisila yazo.
Ukuba unika ikati ukucheba umzimba wonke, yiva intloko yabanqolobi rhoqo ukuze iqiniseke ukuba ayitshisi kakhulu. Iziqholi ezishushu zinokuyitshisa ikati yakho ukuba zinokudibana nolusu lwayo.
Thatha uqhekeko rhoqo
Isitshixo sokucheba ngempumelelo kukungangxami. Ukuzola nokuziphatha ngokungakhawuleziyo kwizenzo zakho, ikati ezolileyo iya kuba yiyo, nayo. Sebenza kancinci ukuphepha ukusika ulusu, kwaye uthathe ikhefu xa uziva ukuba ikati yakho iyaphazamiseka ukuba iqhubeke. Kungathatha ishevu ezininzi ngaphambi kokuba ikati iqonde ukuba le nkqubo ayinakumlimaza kwaye iyazivumela ukuba iphumle ngelixa usebenza. Zama ukugcina ekumoyikiseni ngaphezulu kokuyimfuneko ukwakha le ntembeko kwixesha elide.
Ngelixa kunokubakho amaxesha apho uziva kungangcono ukuba uyichebe ikati yakho ekhaya, kusenokubakho namaxesha apho kufuneka ufune uncedo lobuchwephesha. Yima kwaye ucele uncedo kugqirha wezilwanyana okanye kwisikhulisi ukuba:
Uboya bekati yakho buxubene kakhulu, kwaye iimethi ziyolula kwesikhumba
Ulusu olungaphantsi kwemethi lunamagazi okanye lubonakala lusulelekile
Ikati yakho iphazamisekile kakhulu kwaye ayikwazi ukuthomalaliswa okanye ithintelwe ngokwaneleyo ukuba imcofe ngokukhuselekileyo
Ngaba Uyayicheba Ikati?
Ukuzilungisa rhoqo kunye nokuhlala uzilungisa kunokunceda ukuthintela iimethi kunye nesidingo sokucheba ikati yakho. Ziqhelise ukuzilungisa ngendlela efanelekileyo ngalo lonke ixesha ukunceda ukuphepha le nkqubo ingathandekiyo. Ukuba ukucheba kuyafuneka, sebenza ngononophelo ukuthintela ukoyikisa ikati yakho, kwaye nobabini ninokukhululeka ngakumbi ngoboya bayo.
Antique Tools Ne Hardware Uqeqesho Lwepotty Ikrisimesi Music Ikati Isondlo Umdaniso Umyalelo
Iingoma zekrisimesi kwindawo kawonkewonke
kutheni emane endijonga
ukufundiswa kwabafundi abanomzali ongasekhoyo
yintoni ulawulo lobugrogrisi eFrance?
uyenza njani inzala yangasemva
Abantwana'ingubo Ne Nwele